September 24, 2020 AASYC Statements 0
နေ့စွဲ။ ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် လေ့လာသူနိုင်ငံများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ
အကြောင်းအရာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပွားနေသော လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။
မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၄၃၁) ဖွဲ့မှ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့၌ ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အခြေအနေများ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အခြေအနေများနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ကင်းမဲ့နေသည့် အခြေအနေများကို တင်ပြရင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူလူထုအားလုံး၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားအသိအမှတ် ပြုပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ နှင့် ယခုကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီး ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres မှ တောင်းဆိုထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး (Global Ceasefire) ကို မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လေးစားလိုက်နာစေရေး လုပ်ဆောင်ပေးပါရန် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအား တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသော ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဆိုးကြီးကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ခါးသီးစွာ ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရာတွင် မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတလွှားမှ ဤကပ်ဆိုးကြီးကို အံတုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားနေချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကို အကာအကွယ်ယူပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များတွင် စစ်ဆင်ရေးများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သဖြင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ပြင်းထန် လာခြင်းနှင့်အတူ ထိုဒေသများရှိ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများသည် မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း စသည့် စစ်၏အနိဌာရုံ အောက်တွင် အကာအကွယ်မဲ့စွာ ကျရောက်နေရမှုအပေါ် မိမိတို့မှ အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် Development Media Group သတင်းဌာန၏ သတင်းဖော်ပြချက်အရ ပြီးခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ည ၉း၃၀ နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိ ဘုရားပေါင်း ကျေးရွာနှင့် တောင်ပေါက်ကျေးရွာ နှစ်ရွာလုံးကို မြန့်မာစစ်တပ်မှ မီးရှို့ပြာကျစေခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)၏ မှတ်တမ်းအရ ထိုကျေးရွာ နှစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်အလုံးရေ (၁၉၀) နီးပါး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ထိုတစ်ရက်တည်းတွင်ပင် ရွာသား (၂) ဦးလည်း အသတ်ခံ ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့၌ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု​​ကြောင့် မြေပုံမြို့နယ်ရှိ ညောင်ကန်ရွာထဲ ကျည်ကျသဖြင့် အပြစ်မဲ့ကလေး (၂) ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်းရွာသား (၄) ဦး ကျည်ထိမှန်သေဆုံးပြီး (၁၁) ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိရပါသည်။ တစ်ဖန် ပြီးခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ရွှေလောင်းတင် ကျေးရွာ၌ မြန်မာစစ်တပ်၏ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၄၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးသွားပြီ အရပ်သား (၂) ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
သုတေသနနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူများအဖွဲ့(BM)၏ မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်န္နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများနှင့် ထိုပဋိပက္ခများအတွင်း ကျူးလွန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ အရပ်သား သေဆုံးသူ ဦးရေ စုစုပေါင်း (၄၃၂) ဦးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ (၇၇၅) ဦး ရှိခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အရပ်သား သေဆုံးမှု (၂၉၅) ဦးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ (၆၇၄) ဦး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်များကို ပို၍ ဆိုးရွားစေသည်မှာ ထိုဒေသများရှိ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများသည် ပဋိပက္ခ၏ မြေစာပင် ဖြစ်နေရရုံသာမက ကပ်ဆိုး၏ဒဏ်ကိုပါ ခံစားနေရသည့်ကြားတွင် မြန်မာအစိုးရ၏ သတင်းအချက် အလက် အမှောင်ချထားမှုကိုလည်း ခံစားနေကြရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ပလက်ဝဒေသကို မြန်မာအစိုးရမှ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် အင်တာနက်လိုင်း ဖြတ်တောက်ထားခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် စစ်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို လက်လှမ်းမမီနိုင်ဘဲ စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသော အခြေအနေအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်နေမှုများသည် ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်နေရုံသာမက စစ်ရာဇဝတ်မှုများ နှင့် လူသားမျိုးနွယ်အား ဆန့်ကျင်သော ရာဇဝတ်မှုများမြောက်နိုင်သည့် ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များကို မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ မျက်ကွယ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ ကျူးလွန်နိုင်စေရန် လမ်းဖွင့်ပေးထားခြင်းနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
ထိုမျှသာမက မြန်မာအစိုးရအာဏာပိုင်များသည် စစ်ပွဲများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ရပ်တန့် ရန်နှင့် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအား ပြန်ဖွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုသူများကိုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ အား အကြောင်းပြု၍ မတရားဖမ်းဆီးမှုများ၊ ဖိနှိပ်မှုများနှင့် မတရားပိတ်ပင်တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်ကာ ဒီမိုကရေစီနှင့် အရပ်ဘက် လူထုအဝန်းအဝိုင်းကို ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းစေရန် တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် မိမိတို့အနေဖြင့် အထူးစိုးရိမ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှေ့၌ စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြခဲ့သော ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ကျောင်းသား (၃) ဦးကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ တို့ဖြင့် မတရားဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့တွင် အလားတူ စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗကသအဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကျောင်းသား (၁၃) ဦး သည်လည်း ငြိမ်း၊ စု၊ စီ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခံရပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့၌ စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး စတစ်ကာကမ်ပိန်း ပြုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့် ဗကသအဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကိုဝေယံဖြိုးမိုးနှင့် ကိုပိုင်မင်းခန့်တို့ကို အာဏာပိုင်ရဲများမှ အချိန်မတော် ညအချိန်တွင် ၎င်းတို့ နေအိမ်သို့ ဝင်ရောက်စီးနင်း ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ငြိမ်း၊ စု၊ စီ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းအရေးအတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြသော ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ လူငယ်များအား အာဏာပိုင်အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးဖိနှိပ် အရေးယူနေခြင်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် မြန်မာအစိုးရမှ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားကြောင်း ပြသနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မိမိတို့မှ နားလည်သဘောပေါက်မိပါသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးချကာ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်မှုများအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်သည့် အချိန်မှစ၍ သဘာဝဘေးအန္တရယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုနှင့် ကပ်ရောဂါကာလ စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတို့ဖြင့် လူပေါင်း (၂၀,၀၀၀) နီးပါးကို လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် အရေးယူခဲ့ကြောင်း Radio Free Asia ၏ မြန်မာအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် သိရှိရသည်။ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မည်ဟု ကြွေးကြော်နေသော လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရသည် ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ဒုက္ခပြဿနာများကို ဦးစားပေး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မကြိုးစားဘဲ မျက်ကွယ်ပြုကာ ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကာလ အတွင်းတွင်ပင် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကိုသာ အဓိက အာရုံထား စီမံဆောင်ရွက် နေခြင်းနှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအပေါ် ဖိနှိပ်အရေးယူခြင်းများကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် လာမည့်ကာလတွင် ပိုမိုဆိုးရွားဖွယ်ရှိသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား ဒီထက်မက ကြုံတွေ့ခံစားရမည်ကို မိမိတို့ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ အထူးစိုးရိမ်မိပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးကို ခါးသီးစွာကြုံတွေ့နေရချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် တခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသများရှိ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်မှတ်ထိုးထားသော ဂျီနီဗာ သဘောတူစာချုပ်များကိုလည်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်နေရုံသာမက လူသားမျိုးနွယ်အား ဆန့်ကျင်သော ရာဇဝတ်မှုများကိုပါ ကျူးလွန်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ အရပ်ဘက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်မှ ကျူးလွန်နေသာ စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အား ဆန့်ကျင်သော ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ရရှိစေရေး အလေးအနက်ထား လုပ်ဆောင်ရန် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအား အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆို အပ်ပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်မှ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးအား အကာအကွယ်ယူ လုပ်ဆောင်နေသည့် တိုင်းရင်းသား ဒေသများရှိ ပြင်းထန်သော ထိုးစစ်ဆင်နေမှုများအားလုံး ချက်ချင်းရပ်တန့်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး တောင်းဆိုမှုကို မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့မှ လေးစားလိုက်နာရေး လုပ်ဆောင်ပေးရန်၊
ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်တော်သားများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူ များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား မတရား ဖမ်းဆီးဖိနှိပ် အရေးယူမှုများ ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရေး၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများကို ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေးနှင့် ၎င်းတို့အား စွဲဆိုထား​​သော အမှုများအားလုံး ရုပ်သိမ်းပေး​ရေးတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊
မြန်မာအစိုးရမှ ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာ ကတိကဝတ်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လေးစားလိုက်နာစေရေး လုပ်ဆောင်ရန်၊ နှင့်
နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများမြောက်သည့် ဆိုးရွားသော မြန်မာစစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ အတွက် တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး လိုအပ်သည့်အရေးယူမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် နှင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး​ကောင်စီမှ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံးသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ရေး လုပ်ဆောင်ရန်။
ခင်ဥမ္မာ၊ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့(PV)၊ info@progressive-voice.org
ကိုတိန်ဦး၊ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး(AASYC)၊ aasyc.ghq@gmail.com
မွန်းနေလီ၊ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး – ထိုင်းနိုင်ငံ(KWAT)၊ kwat.office@gmail.com
ထောက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော (၄၃၁) ဖွဲ့မှာ –
1. 88 Generation (Myeik)
2. 88 Generation Nyein/Pwint (Bago)
3. 88/ Nyein Pwint (Kawthoung)
4. 88/ Pwint Linn (Ayeyarwaddy)
5. 8888 သွေးသစ် (မိုးညှင်း)
6. Active Women Development Initiative (AWDI)
7. A Lin Eain Social Development Group
8. A Lin Pya Kyal
9. A Lin Tan
10. A lin Thi Tan
11. A Nar Gatt Thit Group
12. Ah Lin Yaung Pan Taing Developing Group
13. All Arakan Civil Society Organization Partner (AACSOP)
14. All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC)
15. All Kachin Youth Union – AKYU
16. Action Committee for Democracy Development (ACDD)
17. Ahlin Tagar Rural Development Organization
18. Alin Thit Sar Development Group
19. Alinn Bhamaw Development Organization
20. Alinsaetamarn Library and Resource Center
21. Amnesty Arakan Team
22. Andin Mon Youth Group
23. Anin Region Environmental Conservation Group
24. Ann Township Pipeline Monitoring Group
25. Arakan CSO Network (ACN)
26. Arakan Human Educator Network (AHERN)
27. Arakan Humanitarian Coordination Team
28. Arakan Peasant Union
29. Arr Marn Thit Social Development Organization
30. Ar Ra Kha Foundation
31. Arr Thit Yaung Chi
32. Association for Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)
33. Athan – Freedom of Expression Activist Organization
34. Ayeyawady West Development Organization (Minhla)
35. Ayeyawady West Development Organization (Ngaphae)
36. AYY Farmers Union
37. Ayyar Pyo May Women Development Organization
38. Ba Ann Media Group
39. Basic Lawyer Network
40. Bawdi Youth (Ethnic Youth group)
41. Bawa Ahlinn
42. Bee House
43. Bu Thee Taung Youth Network
44. Burma Monitor (Research and Monitoring)
45. Citizen Action for Transparency (CAfT)
46. Candle Light Youth
47. CBT Gaw Ran Gyi Island (Nan Thar Pu)
48. Child Prevention Network
49. Child Protection Group
50. Child and Youth Organization (Shan)
51. Chin Community Based Rehabilitation
52. Chin Human Rights Organization
53. Chin Institute of Social Science
54. Chin Land Affairs Network
55. Chin State MATA Working Group
56. Chin Women Development Organization
57. Chin Youth Organization (Matupi)
58. Chin Youth Organization (Mindat)
59. Chin Youth Organization (Kanpalet)
60. Chindwin region natural resources watch group
61. Chinland Natural Resources Watch Group
62. Cho Chin Women Organization
63. Civil call
64. Community Association Development
65. Community Empowerment and Resilience Association (CERA)
66. Community Development Youth Network
67. Community Observer Association
68. Community Peace Support Group
69. COMREG Community Response Group
70. Cambridge Student Liberal Democrats (CSLD)
71. CSSDD (Pathein)
72. Da Nu Youth Group
73. Daily Educations
74. Dama Ahlin Social Development Organization
75. Dawei Development Association – DDA
76. Dawei Regions Farmer Union
77. Dawei Research Associations
78. Dawei Watch Foundation
79. Democratic Education Corner-DEC
80. Democratic Youth (Bago)
81. Diversity and Public Truth
82. Doe Chaung Doe Thaung
83. Doe Myae Civil Social Development Organization
84. Down Peace Foundation
85. Education (SPACE)
86. Educational Initiatives (EI)
87. Environmental Conservation Association
88. Environmental Justice Group
89. Equality Myanmar (EQMM)
90. Ethnic Equality
91. Ever Green CBO
92. Farmers Agricultural Network
93. Farmer and Land Union (Myeik)
94. Farmer Union (Bago)
95. Farmer and Agricultural Workers Group
96. Farmers And Land Rights Action Group
97. Farmers Union (Ayeyarwaddy)
98. Federation of National Farmer/ Peasant Union
99. Forest User Association
100. Former Political Prisoner Society (East Bago)
101. Free & Fair (youth) Network
102. Free and Justice
103. Free Education Service Organization
104. Freedom Society
105. Future Light Committee
106. Future Light for Child
107. Future Light Center
108. Future Light Social Development Organization
109. Future Star Youth Organization
110. Future Women Association (FWA)
111. Future Young Pioneer Organization
112. Gayunarshin Social Development Organization
113. Generation Wave (GW)
114. Generation Wonthoe
115. Global Family
116. Golden Future Social Development Organization
117. Golden Heart Organization
118. Green Development Network
119. Green for All (NTI)
120. Green Island (Tanintharyi)
121. Green Network (Tanintharyi)
122. Green Network Mergui Archipelago
123. Green Rights Organization (GRO)
124. Good Hope Foundation
125. Grip HandsKa
126. Harmony Youth Association
127. Helping Hand Organization
128. HinTha Da PIDP Group
129. Hinthar Tagon
130. Hkumzup Development Committee
131. Hna Lone Hla (AL)
132. Homalinn Youth Network
133. Hope For Children Development Organization
134. Hsar Ka Paw Group
135. Hsar Mu Htaw Group
136. Hsar Mu Waw Group
137. Htaw Me Par Group
138. Htee Gyaing Network
139. Htoi Gender and Development Foundation
140. Htoi San Local Development Organizaton
141. Htum Thit Sa Rural Development Organization
142. Htuu Region Development Group
143. Human Rights Defender and Promoters (Tanintharyi)
144. Human Rights Foundation of Monland
145. IFI Watch Myanmar
146. Justice Movement for Community – Innlay
147. Ka Nyunt Kwin Youth Center
148. Kachin Peace Network
149. Kachin Women Peace Network (KWPN)
150. Kachin Women’s Union
151. Kachin Women’s Association Thailand
152. Kan Chay Arr Man Fishery Development Organization
153. Kan Latt Myar
154. Kani Natural Resources Watchs
155. Kanpetlet Land Development Organization
156. Karen Environmental and Social Action Network
157. Karen Human Rights Group
158. Karen Peace Support Network
159. Karen Student Network Group
160. Karen Women’s Organization
161. Karen Youth Organization (KYO)
162. Karenni Civil Society Network (KCSN)
163. Karenni Ever Green
164. Karenni Human Rights Group (KnHRG)
165. Karenni MATA
166. Karenni National Women Organization ( KNWO )
167. Karenni National Youth Organization
168. Karenni State Farmer Union
169. Katan Development committee
170. Kaung Myat Hnalonethar Health Care Organization
171. Kawyaw National Youth Organization (KyNYO)
172. Kayan Earth Right Action Network
173. Kayan New Generation Youth
174. Kayan Women Organization
175. Kayin Culture and Literature Committee (Thaton)
176. KECO (Chin)
177. Keng Tung Youth
178. Khaing Myae Thitsar Development Committee
179. Khanti Youths Association
180. Khit A Lin Yaung
181. Kin Oo Natural Resources Watchs
182. Kin Ywar (Ma da yar youth)
183. Kindness Foundation (Karen)
184. Kindness Foundation (Shan)
185. KMSS (Pathein)
186. KOG (Karen)
187. Kachin State Women Network (KSWN)
188. Kyaik Hti Yo Mountain Range Lover Association
189. Kyaingtone Youth
190. Kyike Mayaw MATA
191. Kyonemaku Chaung Network
192. Kyaukpyu Rural Development Association
193. LAIN Technical Support Group
194. Lan Pya Kyal Sin Group
195. Land Activist Group
196. Land and Environmental (Shan State)
197. Lan Pya Kyal Sin Group
198. Lat Pa Daung Monitoring Group
199. LatButta Farmer Union
200. Lawngbit Hkawng
201. Lawyers Network
202. Legal Aid for Human Rights (Shan State)
203. LIAN Technical Support Group
204. Life Light
205. Light Civil Society Organization
206. Light House Ayeyarwaddy Network
207. Light Social Development Organization
208. Lin Lett Kyal Social Development Organization
209. Lisu Civil Society Network
210. Living Water Organization
211. Local Development Network (LDN)
212. Loka Ahlinn (Social Development Organization)
213. Loi Yang Bum Community Development
214. Lu Mu Htar Group
215. Ma Day Island Youth Development Association
216. Ma Naw Phyu
218. MATA Sagaing Region
219. Matupi Women Association
220. Mawduklarmae Social Development Association (MSDA)
221. May Doe Arrman Women Development Organization
222. Media Network (Ayeyarwaddy)
223. Mhine Nyein Network (Bago)
224. Mi Karen Youth
225. Minggalar Foundation
226. Mitta Blood Health Group
227. Mitta San Yae (Shan)
228. Mitta San Yae (Magway)
229. Mitta Shin Group
230. Mitta Yake Group
231. Mitta Yaung Sin Youth Group
232. Mohn Chaung Lover
233. Mon Area Community Development Organization (MACDO)
234. Mon Green Develop Group
235. Mon State CSO Network
236. Mon Youth Organization (zobbu)
237. Mon Youth Progressive Organization (MYPO)
238. Mon Social Development and Peace Network
239. Mon Region Social Development Network
240. Mong Pan Youth Association
241. MRDJO Magway Regional Rules of law and Justice group
242. Mu Se Multi Development Association
243. Mudidar Ziwadarna and Social Association
244. Muditar Organization
245. Mudon CSO Network
246. Mudon Township Development Group
247. Municipal Monitoring Group
248. Muu Basin Environmental Save Group
249. Mwetaung Area Development Group
250. Myanmar Digital Rescue (MDR)
251. Myanmar People Alliance (Shan State)
252. Myanmar Cultural Research Society (MCRS)
253. Myanmar People Alliance (Shan State)
254. Myat Darna Group
255. Myaebon Youth Association
256. Myeik Lawyer Network
257. Myit Ma Ayeyarwaddy Development Organization
258. Na Phat Hla
259. Namkyeo Parahita Foundation
260. Nam Shani Organization
261. Nann Kyar Youth Association
262. Nant San Environmental Save Group
263. NeT Organization
264. Nyan Lynn Thit Analytica
265. Olive Organization
266. Open Development Foundation
267. Our Natural Land
268. Oway Education and Youth Institute
269. Paung Ku
270. Pae Kaing Shin Group
271. Pan Daing Shin
272. Pan Tain Shin Women Rural Development Organization
273. Pan Thi Kyo LGBT Organization
274. ParChan River Maintenance Committee
275. Pauk Khaung Youth Network
276. Pauk Taing Development Committee
277. Paung Sie Ayar
278. Paungsee Myittar Organization
279. Peace and Rule of Law Acceleration Network (PRLAN)
280. Peace, Development & Civic Engagement (P.D.CE)
281. Peace Working Committee (PWC)
282. Peace for Youth
283. Peasant Legal Aid Network (PLAN)
284. People Oriented and Development Group
285. People for People (PFP)
286. Phyu Sin Mitta
287. Phyu Sin Myittar Social Development Organization
288. Pone Yate Sit Regional Development Organization
289. Progressive Voice
290. Pwint Lin Voluntary Group
291. Pwint Lin Youth
292. Pwint Phyu Development Group
293. Pyar Taung Conservation Group
294. Pyay Division Mhine Peace Network
295. Pyi Thue A Kyoe Pyue Group
296. Pyo Khin Thit
297. Pyoe Organization
298. Parshan River Maintenance Committee
299. Rakha Arr Marn Group
300. Ra Kha Yin Thwe
301. Rakhine State Disabilities Organization
302. Rakhine Ethnics Congress
303. Rakhine National Network (Lay Taung)
304. Rakhine Social Network (Myaebon)
305. Rakhine State Civil Society Organizations Peace Committee
306. Rakha Strength Social Development Organization
307. Rakhine Women Network
308. Rakhaing Women’s Union
309. Rakhine Youth New Generation Network
310. Rakhine Youth Generation
311. Ran Byae Township Development Group
312. Rural Development Organization
313. Real Voice Myeik
314. Reliable Organization
315. Resources Center (Chin)
316. Responsible Waste Collecting Group
317. Retired Voluntary Group
318. Rivers and Creeks Monitoring Group
319. Rule of Law Watch Group
320. Rural Social Development Organization
321. Sabae and Kyay Sin Mining Watch Group
322. Sarnar Kyi Phyu Social Development Organization
323. SarPhyu Farmer Network
324. Sanpya Social Development Group
325. Say Da Nar Mon Voluntary Group
326. Say Da Nar Shin
327. Saytana Shaesaung Youth Organization
328. Sein Lan (Mogoke)
329. Sein Lan (Tha Pake Kyin)
330. Sein Lan Lwin Pyin Group (Laputta)
331. Sein Lan Myay (Kyun Hla)
332. Sein Lann Mon Myay
333. Sein Yaung So (Katha)
334. Shan Literature
335. Shan MATA Working Group
336. Shan State Peace Taskforce
337. Shan Women Development Network
338. She Sawng Kyea Women Group (Karmai)
339. Shining Star Interfaith and human rights Group
340. Shwe Kyin Lover
341. Shwe Min Thar Foundation
342. Shwe Nathar Farmer Development Organization
343. Shwe Network
344. Shwe Paing Nyin Group
345. Shwe Pan Pyo Lat (Education, Women and Child Support)
346. Shwe Thinkha Social Development Organization
347. Shwechinthae Farmers Network
348. Sit Man Thaw Sanda Social group
349. SKY-Youth, Kyaukphyu
350. Social Development and Peace Network
351. Social Program Aid for Civic
352. Southern Youth Group
353. Southern Youth Development Organizations’
354. Star Way Organization
355. Student and Youth Congress of Burma – SYCB
356. Swam Su Ti Rural Development Organization
357. Ta’ang Women’s Organization
359. Tanintharyi Civil Society Group’s Peace Committee
360. Tarkapaw Youth Group
361. TaungGoke Public Service Committee
362. Tedim Youth Fellowship
363. Tigyit Watch Group
364. Than Dwe Development Association
365. Than Lwin Thar Chin group
366. Thanlwin Network
367. The Seagull:Human Rights, Peace & Development
368. Thit Sar Yae Sin
369. Third Eye Organization (Mindat)
370. Thin Gan Taung Waterfall Group
371. Thazin – Legal Aid Group
372. Thurira Sanda group
373. Thwee CSO
374. Tonzang Fellowship
375. Tonzang Youth Association
376. Tonzang Youth Fellowship
377. Township Leading Group (Waingmaw)
378. Transparency and Accountability Network Kachin State
379. Tree Lover group
380. Thint Myat Lo Thu Myar (Peace Seekers and Multiculturalist Movement)
381. Uak Thon Local Social Development Organization
382. Union of Karenni State Youth
383. Universities of Kachin Literature And Culture Federation
384. Upper Chindwin Youth Network
385. Upper Myanmar Watch Group
386. Waingmaw CSO Network
387. Waingmaw Lisu Development Association
388. Wan Lark Development Foundation
389. Western Beach Ayeyarwaddy Environmental Conservation Group
390. White Hand Social Welfare Group
391. Windayea Village Social group
392. Women Development Group (Bago)
393. Women Development Group (Ayeyarwaddy)
394. Women Empowerment Group
395. Women for Women Foundation (WWF)
396. Wonthoe Youths
397. Worker Development Organization
398. World View Monitoring and helping Group
399. Yai Ywal Yar Youth Development Organization
400. Yae Aye Alliance Development Group
401. Yangon Youth Network
402. Yangon MATA
403. Yatanar Youngyi Social Development Organization
404. Yaung Chi Thit Public Library group
405. Yaung Zin Arr Man Group
406. Yaung Zin Hlaing
407. YoeMa Civil Society Group
408. Young Ni Oo Social Development Organization
409. Young Ni Oo Women Group
411. Youth Arr Man Group
412. Youth For A New Society Amnesty Arakan Team
413. Youth For A New Society (YNS)
414. Youth Initiative for Human Rights
415. Youth Society Network
416. Zomi Youth Association
417. Zo Youth Organization
418. Zomi Students and Youth Organization
419. ကချင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့(တက္ကသိုလ်များ) အသင်းချုပ်
423. မိတ္ထီလာခရိုင် အလင်းတန်းအဖွဲ့
425. မေမြို့ တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက်
426. ရွှေတောင်တိုက်နယ်တောင်သူ့အားမာန် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်
428. လေဖြတ်သူများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း မြန်မာ(SAM)
430. ဆွေသဟာ လူမှုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့
အောက်တွင် PDF ဖိုင်ကို ရယူပါ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ (ENG) ဖြင့်